भक्तपुर अस्पतालमा सुरु भयाे कोरोना परीक्षण – Health Post Nepal
भक्तपुर अस्पतालमा सुरु भयाे कोरोना परीक्षण
२०७७ कार्तिक २७ गते १४:३१
प्रदेश सरकारको सहयोगमा भक्तपुर अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण सेवा र सघन उपचार कक्ष (आइसियु) को स्थापना भएको छ।बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बिहीबार एक समारोहबीच दुवै सेवाको उद्घाटन गरेका छन्।
भक्तपुर जिल्लामा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि समुदायस्तरमा कोरोना फैलिन नदिन नगरपालिकाको वडा नं–१ मा अवस्थित भक्तपुर अस्पतालमा पिसिआर परीक्षणको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश मन्त्री दुलालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक समिक्षा गर्दा भक्तपुर अस्पतालको प्रगति अरु अस्पतालको भन्दा उत्कृष्ट भएको बताए।
एनजिओद्वारा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको थुप्रै बेथिति औंल्याउँदै मन्त्री दुलालले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सरकारी व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए।
सरकार मातहत सञ्चालनपश्चात भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले भरतपुर अस्पतालमा जस्तै सस्तोमा स्तरीय क्यान्सर उपचार सेवा प्रदान गर्ने उनले बताए।
मन्त्री दुलालले प्रदेश अस्पतालको आन्तरिक सुदृढीकरणको लागि नेतृत्व व्यवस्थापनमा जोड दिँदै अगाडि बढेकै कारण अस्पतालको विकास सम्भव भएको बताए। उनले प्रदेश सरकार कोभिड महामारीबाट विजय प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको दाबी गरे।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर अस्पताल बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल सावित भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। नगरप्रमुख प्रजापतिले अस्पतालले बिरामीको विश्वास जित्न सक्नु खुसीको कुरा भएको भन्दै निजी अस्पताल जनताको सेवा भन्दा नाफा र संस्थागत फाइदाको निम्ति सञ्चालन भएका आरोप लगाए।
सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भन्ने गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रजापतिले बताए।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. सुमित्रा गौतमले पिसिआर सेवाको प्रारम्भिक परीक्षण भइरहेको र अस्पतालबाट परीक्षण निःशुल्क रुपमा गरिने जानकारी दिइन्।
अस्पतालमा परीक्षणको व्यवस्थाका लागि भक्तपुरका जनप्रतिनिधि एवं जनताले निरन्तर पहल गर्दै आइरहेको स्मरण गर्दै डा. गौतमले कोभिड महामारी बीच पनि अस्पताल अहोरात्र बिरामीको उपचार र सेवामा समर्पित भएर लागिपरेको बताइन्।
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो भने जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका संयोजक नवराज गेलाल, भक्तपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिलन सुवाल, पत्रकार महासंघ भक्तपुर जिल्लाका अध्यक्ष पुष्कर बुढाथोकीलगायतले पनि शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए।
One thought on “भक्तपुर अस्पतालमा सुरु भयाे कोरोना परीक्षण”